Dhizaini magazini
Muvhuro 14 Chikumi 2021
Zvemukati Dhizaini Ruvara rwegrey runofungidzirwa kuva rinofinha. Asi nhasi uno ruvara rwumwe kubva kumusoro-liners mune masitayera akadai seyakavakirwa, minimalism uye hi-tech. Grey ruvara rwekuda zvekuvanzika, humwe rugare, uye zororo. Iyo inonyanya kukoka ivo, avo vanoshanda nevanhu kana vanoita basa rekuziva, seyakajairwa zvemukati ruvara. Madziro, siling, fenicha, machira, uye pasi zvakachenuruka. Hes uye kuiswa kwegrey kwakasiyana chete. Goridhe yakawedzerwa nezvimwe zvekuwedzera uye zvishandiso. Iyo inosimudzirwa nemufananidzo wemufananidzo.
Svondo 13 Chikumi 2021
Chiziviso Chorudzi Iko kukurudzira kweiyo rudzi rwekufunga zvakare uye kugadzirisa patsva kwaive shanduko mukuvandudza uye kubatanidza mutsika yekambani. Dhizaini yemoyo yaisakwanisa kuve kunze kweiyo mhando, inokurudzira mubatanidzwa vese mukati nevashandi, asiwo nevatengi. Mubatanidzwa wakabatanidzwa pakati pezvakanakira, kuzvipira uye mhando yebasa. Kubva pane chimiro kusvika kune mavara, dhizaini nyowani yakabatanidza moyo kupinda muB uye muchinjika wehutano muT. Mazwi maviri akabatanidzwa nepakati achiita kuti logo rioneke seshoko rimwe, chiratidzo chimwe, kubatanidza iyo R uye B mukati. mwoyo.
Mugovera 12 Chikumi 2021
Dhizaini Iyo dhizaini ye EXP Brasil brand inouya kubva kumakambani nheyo dzekubatana uye kushandira pamwe. Kugadziridza musanganiswa pakati pehunyanzvi uye dhizaini muzvirongwa zvavo kunge muhupenyu hwehofisi. Chinhu chekutepa chinomiririra mubatanidzwa uye simba rekambani ino. Iyo mavara X dhizaini yakasimba uye yakabatanidzwa asi yakapepuka uye tekinoroji. Iyo mhando inomiririra hupenyu hwe studio, iine zvinhu mune mavara, zvese pane zvakanaka uye zvisina kunaka nzvimbo iyo inobatanidza vanhu uye dhizaini, munhu oga uye pamwe chete, akareruka netekinoroji, akareruka uye akasimba, nyanzvi uye yemunhu.
Chishanu 11 Chikumi 2021
Seti Yekofi Magadzirirwo ebasa iri akafuridzirwa nezvikoro zviviri zvekutanga kwezana ramakore German Bauhaus uye Russian avant-garde. Yakasimba geometry yakananga uye yakanyatsofungidzirwa-kushanda inoshanda zvinoenderana nemweya wezviratidziro zvenguva idzodzo: "chii chakafanira chiri chakanaka". Panguva imwechete inotevera maitiro emazuva ano mugadziri anosanganisa maviri akasiyana misiyano muchirongwa ichi. Yakapera chena mukaka porcelain inosungirirwa neakachena anopenya akagadzirwa cork. Kuita kweiko dhizaini kunotsigirwa neakareruka, kwakanakira kubata uye kubata kwese kwese fomu.
China 10 Chikumi 2021
Imba Ichishandisa huni sechinhu chikuru chinovaka, imba inodzinga nhanho dzayo mbiri muchikamu, ichigadzira denga rakashongedzwa kuti riungane nemamiriro acho uye bvumidze mwenje wepanyama kuti upinde. Iyo mbiri yekumusoro nzvimbo inotsanangudza hukama ihwo hwepasi pevhu, iyo yepamusoro yepamusoro uye nzvimbo. Denga resimbi pamusoro penzvimbo inobhururuka tambo, ichidzivirira kubva pachiitiko chezuva rekumadokero uye nekumisazve kuvaka huwandu, ichipenya kuratidzwa kwenzvimbo yakasikwa. Chirongwa ichi chinotsanangurwa nekuwana zvinoshandiswa neruzhinji pasi pasi uye zvakavanzika zvinoshandiswa pasi repamusoro.
Fanicha Pamwe Fan Fan
Chitatu 9 Chikumi 2021
Fanicha Pamwe Fan Fan Brise Tafura yakagadzirirwa neine mutoro wekutorova shanduko yemamiriro ekunze uye chishuvo chekushandisa mafani kwete yemhepo maindasitiri. Panzvimbo pekuvhuvhuta mhepo yakasimba, inotarisana nekunzwa kutonhorera nekutenderera kwemhepo kunyangwe mushure mekudzikisa iyo mhepo yekuisa. NaBrise Tafura, ivo vashandisi vanogona kuwana imwe mhepo uye yekushandisa senge tafura yepamhepo panguva imwe chete. Zvakare, inozadza nharaunda zvakanaka uye inoita nzvimbo yakawedzera kunaka.
Muvhuro 7 Chikumi 2021
Memento Tsamba Yekuvhura Muvhuro 14 Chikumi
Exxeo Yakasarudzika Hybrid Piyano Svondo 13 Chikumi
Phuket VIP Mercury Hofisi Mugovera 12 Chikumi
Dhizaina bvunzurudzo yezuva Muvhuro 14 Chikumi
Dhizaina ngano yezuva Svondo 13 Chikumi
Dhizaini yezuva Mugovera 12 Chikumi
Mugadziri wezuva Chishanu 11 Chikumi
Dhizaini timu yezuva China 10 Chikumi
Zvemukati Dhizaini Chiziviso Chorudzi Dhizaini Seti Yekofi Imba Fanicha Pamwe Fan Fan